Dowlada Spain ku gacansayray madaxbanaanida Catalonia – Hiiraanxog.net
HomeWararka SoomaaliaDowlada Spain ku gacansayray madaxbanaanida Catalonia
Dowlada Spain ku gacansayray madaxbanaanida Catalonia
Hiiraan Xog, Oct 11, 2017:- Dowladda Spain ayaa ku gacan sayrtay madaxbanaanida ay ku dhaqaaqeen gobolka Catalonia ee dhowaanta aftida la qaaday.
Waxaa sidoo kale xukuumadu ay diiday inay wax wadahadal ah la gasho madaxda gobolka Catalonia.
Ra’iisul wasaare kuxigeenka Spian ayaa ku tilmaamay hogaamiyaha Catalonia qof aan garanayn meesha uu joogo iyo halka uu ku socdaba.
Ra’iisul Wasaare Marriano Rajoy ayaa qabanay shir deg deg ah oo golaha wasiiradu ay yeelanayaan kagana xaajoonayaan amuurtan.
Hogaamiyaha gobolka Catalonia ayaa saxiixay madaxbanaanida ay dadku u codeeyeen isbuucii hore.
Muranka xoogan ee soo kala dhexgalay xukuumada Madrid iyo gobolka Catalonia ayaa salka ku hayay madaxbanaani ay mudo dheerba doonayeen dadka reer Catalonia.
Hogaamiyaha Catalonia ayaa caalamka ugu baaqay in la aqoonsado madaxbanaanidooda.